गैसस महासंघको सिफारिसमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग ! - Bulbul Samachar
गैसस महासंघको सिफारिसमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग !
bulbul बिहिवार, असार १० गते 147 views
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल जिल्ला शाखा म्याग्दीले जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा गैसस महासंघको सिफारिसमा गर्नुपर्ने माग गरेको छ । मङ्गलबार गैसस म्याग्दीको आयोजनामा सम्पन्न भर्चुअल माध्यमको कार्यक्रमपछि महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएको हो ।
हाल जिल्लामा सञ्चालनरत अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरुलाई गैसस महासंघको सिफारिसमा स्थानीय गैससमार्फत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रुपान्तरित हुन अनुरोध गरिएको गैरसरकारी संस्था महासंघका जिल्ला अध्यक्ष दिपक पौडेलले हस्ताक्षर गरी जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । गैसस महासंघको अनुरोधलाई वेवास्ता गरेको खण्डमा थप गतिविधि अगाडि बढाउन आफूहरु बाध्य हुने सो विज्ञप्तिमार्फत जनाइएको छ । साथै महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को रोकथाम तथा न्युनीकरणमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्न गैससकर्मीहरुलाई पनि यथाशीघ्र खोपको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसमक्ष माग गरिएको छ ।
अन्नपूर्णले ल्यायो ४२ करोड ३० लाखको बजेट !
बाढीपहिरो पीडितलाई एमालेले गर्‍यो राहात वितरण !